Fampiharana hijerena fahitalavitra maimaim-poana, na fantsona handoavam-bola aza! | Androidsis
Fampiharana hijerena fahitalavitra maimaim-poana, na fantsona mandoa isaky ny mijery aza!
Ignacio Sala | | Fampiharana Android, Streaming, Android cheat, Tutorials
Ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra ho an'ny maro isika, fotoana fialan-tsasatra ary manararaotra ny fotoana malalaka mankany amin'ny pisinina na amoron-dranomasina, mivoaka hisakafo hariva mangatsiatsiaka, ary rehefa miverina any an-trano isika mijery tele mandritra ny fotoana fohy amin'ny fomba milamina.
Izany no antony itondrako anao maromaro fampiharana hijery tele maimaim-poana Azo antoka fa hiaraka aminao mandritra ny fahavaratra ianao na aiza na aiza alehanao, ary miaraka amin'ireto fampiharana maimaim-poana roa ireto dia ho afaka izahay, ankoatry ny fijerena maimaim-poana ny fahitalavitra, fahitalavitra avy amin'ny olon-drehetra, avela ihany koa mijery fantsona pay-per-view an-taonina maimaim-poana.
Ny tena mahagaga indrindra dia ianao fampiharana roa hijerena fahitalavitra maimaim-poana Azontsika atao ny misintona azy ireo maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store, izay fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android. Faingàna haingana hampidina azy ireo alohan'ny hanesorana azy ireo amin'ny magazay Google.
Raha izany dia efa tara ianao amin'ny fisintomana ireo rindranasa roa hijerena fahitalavitra maimaim-poana avy amin'ny fivarotana Android ofisialy, aza manahy mihoatra ny famoizam-po hatramin'ny taona GrupoAndroidsis ao amin'ny Telegram ho hitanao ireo apk roa ireo amin'ny fampidinana mivantana izay anontanianao ny mpitantana ny vondrona ihany Jorge Alejo, Dezfachatado, Ademir na Antikristy.
Jereo fantsona aloa maimaim-poana
1 Heliaca TV sy Ketchup Canli TV
2 Sintomy ny Heliaca Tv afaka amin'ny APK PURE
3 Sintomy ny MOBDRO TV maimaim-poana avy amin'ny tranokalanao manokana, tsy mandeha intsony i Ketchup
Heliaca TV sy Ketchup Canli TV
Ny Heliaca TV sy Ketchup TV dia fampiharana mamela antsika hijery fahitalavitra maimaim-poana avy amin'ny tontolo manerantany, ao anatin'izany ireo fantsona antsoina hoe pay-per-view, PPV, izay azontsika atao koa ny mahita sy mijery maimaimpoana amin'ity fampiharana Android manaitra ity.
Fampiharana iray izay tena tsotra ampiasaina, amin'ny voalohany, raha vantany vao manokatra azy ireo izahay, dia haseho anay ny lisitry ny firenena na faritra jeografika mifanaraka amin'ny fantsom-pahitalavitra maimaimpoana sy maimaim-poana izay misy fampiharana tsy andoavam-bola tanteraka.
Fampiharana tsara lavitra noho ny Netflix ary maimaim-poana tanteraka
Araka izany, ohatra, isika dia manana firenena sy faritra ara-jeografika toa ireo izay omeko antsipirihany etsy ambany:
Ao anatin'ity lisitr'ireo firenena be dia be ity no anananay fantsom-bahoaka sy fantsom-pandoavam-bola izay miasa ao amin'ny faritany voalaza etsy ambonyOhatra, any amin'ny faritr'i Espana, izay eto Androidsis no mahaliana antsika indrindra noho ny toerana misy antsika, dia ireto ny lisitry ny fantsona:
Ny mailaka amin'ny fahitalavitra
M + D Sinema
M + Premieres
M + hatsikana
M + Hetsika
M + andiany
M + andiany fanampiny
M + Partidazo
M + Fanatanjahantena
M + Golf
Fahitalavitra Real Madrid
Ahoana ny fahitanao ny lisitry ny fantsona izay ananan'ny rindranasa roa, farafaharatsiny ho an'ny faritra na faritanin'i Espana, dia voatahiry tsara, miaraka amin'ny lisitra lehibe fantsona ankapobeny, fantsom-bahoaka sy isam-paritra ary koa fantsona pay-per-view izay ilazana ny marina, ny ankamaroany, na farafaharatsiny ireo izay vitako nosedraina manokana, tena miasa tsara izy ireo.
Fanavaozana: satria toa tsy hita ao amin'ny Play Store intsony ireo fampiharana hijerena fahitalavitra ireo, dia mamporisika anao izahay MegaTV Player, fampiharana iray hafa hahitana fantsona fandoavam-bola nefa tsy mandoa vola, izahay koa dia nanisy rohy mankany Fampidinana Heliaca TV avy amina loharanom-pahalalana azo antoka toy izany koa nosoloinay MOBDRO ny Ketchup TV ilay iray ho ahy no fampiharana tsara indrindra amin'ny fotoana hijerena fahitalavitra mandoa maimaimpoana.
Sintomy ny Heliaca Tv afaka amin'ny APK PURE
Sintomy ny MOBDRO TV maimaim-poana avy amin'ny tranokalanao manokana, tsy mandeha intsony i Ketchup
Betsaka ny mpampiasa mampiasa lisitra IPTV hahafahana mijery ny DTT (ho fanampin'ny fantsom-bola hafa aloa maimaim-poana). Na izany aza, ireo karazana lisitra ireo dia matetika tsy havaozina matetika ary amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, rehefa afaka fotoana fohy dia mijanona tsy ho hita intsony ny ankamaroan'ny fantsona, izay manery antsika hiverina hitady safidy hafa izany.
Na dia avo dia avo aza ny isan'ireo televiziona isan-tokantrano, tsy ny mpikambana ao amin'ny vondrona iray ao amin'ny fianakaviana no manana ny fahita lavitra amin'ny fahitalavitra rehefa ilainy izany. Amin'ireto tranga ireto, ny lisitry IPTV izay efa noresahiko etsy ambony. Safidy hampiasa ny pejin-tranonkala ofisialin'ireo fantsona tianay ho hita. Ny iray hafa mitranga fantsona DTT maimaimpoana amin'ny fampiharana iray.
Ao amin'ny Play Store dia manana rindranasa marobe izay mijoro ho mpitari-dàlana amin'ny fahitalavitra isika, na dia mamela antsika hijery ny DTT avy amin'ny fitaovantsika aza izy ireo, na izany aza, tsy izy rehetra no mandeha tsara, ary tsy havaozina araka izay ilaina mba hahafahany manolotra kalitao serivisy ho an'ny Username noho ny zon'ireo tambajotram-pahitalavitra.
Raha mitady rindranasa hijerena DTT ianao na aiza na aiza misy anao, na amin'ny finday avo lenta na tablette, dia asehonay anao ny safidy roa tena tsara jereo ny DTT avy amin'ny Android.
Ny rindranasa voalohany resahintsika dia antsoina hoe TDT Channels, ny fampiharana dia manao izay mampiroborobo azy ary tsy inona fa ny mamela antsika jereo daholo ny fantsona DTT maimaimpoana ary tsy misy doka. Ny Espaniôla Marc Vila dia namorona ilay fangatahana, izay izy kosa no miandraikitra ny fanavaozana ny loharanom-pahalalana ka misy hatrany ny fantsona rehetra.
Raha lasa zatra mampiasa fampiharana IPTV isika, izay nahafahanay nandoa vola ary tsy tianay ny rindrambaiko an'ity rindranasa ity (tena tsy azo inoana), dia afaka mampiasa ilay Lisitra IPTV ananantsika eo am-pelatananay amin'ny pejin-tranonkala iray ihany izay ahafahantsika misintona ilay rindranasa. Ireo lisitra ireo dia mitovy amin'ny ampiasain'ny rindranasa, noho izany, tsy maninona raha mampiasa ny fampiharana DTT Channels na fampiharana IPTV ianao.
Tsy toy ny rindranasa hafa, ny TDTChannels, mamela antsika, tsy ny hiditra amin'ireo fantsom-panjakan'ny DTT ihany, fa koa mamela antsika hiditra amin'ny fantsom-paritra rehetra misy any Espana, asa iray izay tsy isalasalana fa hankasitrahan'ireo rehetra izay noho ny antony ara-pianakaviana na asa any ivelan'ny faritany nahaterahana nefa te hampahafantatra azy amin'ny fotoana rehetra ny zava-mitranga ao amin'ny fiarahamonin'izy ireo.
Ny molotra amin'ny mofomamy dia mamela antsika hiditra amin'ny onjam-peo amin'ny ankapobeny, koa azontsika atao ny mampiasa ny fampiharana hihainoana ireo toerana malalantsika, na vaovao izany na mozika. Ny TDT Channels dia toy ny antsy miaramila soisa, iray-in-iray mamela antsika mankafy fiasa marobe amin'ny fampiharana iray.
Ny fomba tokana ahafahana mankafy DTT amin'ny takelaka finday finday Android dia amin'ny alàlan'ny fampiharana izay Tsy misy ao amin'ny Play Store an'ny Google, izay midika fa nampavitrika ireo fotodrafitrasa fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Para ampidino ny fampiharana TDTChannels, tsy maintsy mitsidika isika tranokalan'izy ireo, tranokala izay, raha ny fanazavana, afaka mahita an-tserasera ihany koa isika. Raha te-hisintona ny kinova Android dia tsy maintsy tsindrio ny sary famantarana Android, hita eo ankavanan'ny View Online eo an-tampon'ny pejy.
Vantany vao alaina sy apetraka izy io dia mila manokatra ilay rindranasa fotsiny isika safidio raha te hijery DTT isika na hihaino onjam-peo hanombohana ny filalaovana. Etsy an-danin'izany, ny fiasa mamela antsika hihaino ny radio dia miasa any aoriana.
Mamela antsika i TDTChannels karohy amin'ny alàlan'ny fantsona na onjam-peo, ankoatry ny fanolorana aminay ny fahafaha sivana ny fantsom-pahitalavitra sy onjam-peo avy amin'ny Communities Autonomous, fiasa mety indrindra hanafoanana ireo fahitalavitra isam-paritra izay tsy mikasa ny hahita azy.
Araka ny efa nanamarihako ny fizarana teo aloha, raha misy fangatahana ahafahantsika mankafy an-tserasera amin'ny DTT maimaimpoana, dia tsy tokony ho hita ao amin'ny Play Store izy io noho ny olana azo avy amin'ny zon'ny fahitalavitra. Ny safidy hafa atolotray hankafizanay ny DTT amin'ny finday avo lenta, tsy rindranasa io fa pejy web.
Miresaka momba ny tranonkala aho photocall.tv, tranokala mamela antsika midira amin'ny fantsona DTT Espaniola rehetra ho fanampin'ny fantsona iraisampirenena marobe mivantana avy amin'ny tranokalanay nefa tsy mila mametraka rindranasa fahatelo.
Manolotra antsika koa izy io fidirana amin'ny fantsom-bola lehibe, fa tsy mivantana, fa amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny pejin-tranonkala hafa ahafahantsika manao izany, ka amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy mandeha matetika izy io ary raha mandeha izy dia hijaly amin'ny fanaovana dokambarotra be dia be isika, noho izany tsy tsara ny mampiasa safidy io.
Toy ny TDTChannels, photocall.tv Manolotra fidirana amin'ny onjam-peo lehibe koa izy io, tsy avy any Espana ihany fa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao koa, noho izany dia azontsika atao ny mampiasa azy erak'izao tontolo izao, tsy any Espana irery no mitranga amin'ny fampiharana teo aloha. Mba hahamora kokoa ny fitadiavana ilay fantsona tadiavintsika, dia azontsika atao ny mampiasa ny motera fikarohana mifangaro hita eo an-tampon'ny pejin-tranonkala.
Ho fanampin'izany, mamela antsika hiditra amin'ny programa DTT koa izy io, mampifandray amin'ny mpitarika TV lehibe toy ny TV Guía, Vertele, Formula TV, Claro TV, IzziTV, Fútbol TV, Aiza no hijerena azy ... Fomba iray hafa anoloran'ity tranonkala ity anay ihany koa, dia ny rohy hametrahana extensions ao amin'ny Chrome na Firefox ao amin'ny kinova birao mba hamoahana ny atiny, fantsona firaketana, sivana fanaovana dokam-barotra, VPN ...
Ny zavatra voalohany tsy maintsy raisintsika hampiasa ity pejy web ity dia ny browser. Ireo mpizahatany roa mpanohana tsara indrindra miaraka amin'ity pejy ity miaraka amin'i Chrome sy Firefox, izay nanararaotako nisedra azy ireo sy hanamarina ny fiasan'izy ireo.
Mba hijerena fantsona manokana dia mila tsindrio ny anarany isika ary misafidy Direct na ny firenena izay tiantsika hijerena ny fandefasana amin'izany fotoana izany, tsy ny fantsona rehetra no manome safidy mitovy antsika, misy ny sasany manomboka mivantana ny playback.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana hijerena fahitalavitra maimaim-poana, na fantsona mandoa isaky ny mijery aza!
Fernando Cil Castillo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Fernando Cil Castillo
misy fampiharana mitovy amin'izany amin'ny pc
Douglas dia hoy izy:
Satria tsy azo sintonina amin'ny APP izy ireo. Izay azoko atao
Valiny tamin'i Douglas
Itzá dia hoy izy:
Salama tiako ny rohin'ireo rindranasa ireo satria ao amin'ny toeram-pilalaovana dia tsy misaotra mialoha izy ireo
Mamaly an'i Itza
Marino dia hoy izy:
Afaka mampita rohy fisintomana mivantana ahy ho an'ny fahitalavitra Heliaca sy Ketchup ve ianao?
Valiny tamin'i Marino
juanito dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako mamorona rindranasa mitovy na mitovy amin'ireo?
Mamaly an'i juanito
ary maninona aho no hanome hevitra raha tsy mamaly ilay bandy. Tena tsara ary misaotra azy aho fa tsy mamaly izy. Te hahita izany amin'ny solosaina finday aho, misy programa ve momba izany?
Valio i Miguel
tsy misy fisakafoanana
Clyma Weather dia fampiharana toetr'andro vaovao sy tsotra izay manambatra angona avy amin'ny mpamatsy 3
Samsung's Galaxy Z Flip dia telefaona misy fakantsary tsara? [Avereno jerena ny DxOMark]